स्विमिङ पुलको पानीमा खसेको साथीलाई बचाउन कुकुरको यस्तो उपाय, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
स्विमिङ पुलको पानीमा खसेको साथीलाई बचाउन कुकुरको यस्तो उपाय
रोचक । कुकुर घर पालुव जनावर हो । कुकुर मानव समाजमा सहजै अटाउन सक्ने भएकोले होला यसलाई घरपालुवा भनिएको । घरपालुवा जनावरमा समाजिक प्राणीमा हुने गुण अटेको हुन्छ ।
समाजमा बस्ने प्राणीमा एकले अर्र्र्र्र्कोलाई भैपरि आएको बेला सहयोग गर्ने गुण लुकेको हुन्छ । कुकुर पनि समाजिक प्राणी भएको ले यसमा पनि सहायोगी भावना नहुने कुरै भएन ।
यस्तै आफ्ना सहपाठीका लागि सहयोगी भावनाको उदाहरण प्रस्तुत गरेको एउटा कुकुरको भिडियो आज डिसीनेपालले तपाईहरुलाई देखाउँदै छ । आफ्नो साथी स्विमीङ पुलको पानीमा खसेपछि एउटा कुकुरले उसको सद्धारमा देखाएको चतुर कला देखेर तपाई चकित पर्नुहुनेछ ।
यो भिडियो अमेरिकाको एरिजोना राज्यको एउटा स्विमिङ पुलको हो । घरका सदस्हरु नभएका बेला स्मोकी र रेमुश नामका दुई साथी कुकुरहरु घरको चौरमा रहेको स्विमीङ पुल छेउमा खेलिरहेका बेला स्मोकी पुलमा खस्न पुग्छ ।
आफ्नो प्रीय साथी स्विमिङ पुलको पानीबाट बाहिर आउनका लागि सहयोग को याचना देख्न नसकेपछि रेमुश पानिमा हामफाल्छ र आफ्नो टाउकोले धकेलेर उद्धार गर्छ ।